नेविसंघको निर्वाचनमा शून्य मत ल्याउने ६ जना, कसले कति ल्याए ? (मतसहित) « Pahilo News
नेविसंघको निर्वाचनमा शून्य मत ल्याउने ६ जना, कसले कति ल्याए ? (मतसहित)
प्रकाशित मिति : 19 August, 2016 9:45 am
३ भदौ । करिब नौ वर्षपछि सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । उक्त महाधिवेशनमा सुदुरपश्चिमका नैनसिंह महर आफ्ना ६ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए ।
उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट विजयी भएका हुन् । उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका मनोजमणि आचार्यलाई समेत पराजित गरे । नैनसिंह महरले १४ सय ४७ मत ल्याउँदा आचार्यले १३ सय २८ मत ल्याए । त्यस्तै अध्यक्षकै उम्मेदवार आनन्द राज त्रिपाठीले ३ सय ८४ मत ल्याए भने नगेन सिंह ठकुरीले ६९ मत ल्याए । त्यसैगरी बचन कार्की (मुसा) ले १२ र शुभराम बस्नेतले ८७ मत ल्याए ।
उपाध्यक्षमा प्रदेश नम्बर एकबाट विकास केसी (खत्री) निर्वाचित भएका छन् । उनले १ सय ४६ मत ल्याए । प्रदेश नम्वर एकबाट गोपाल सेडाई, विष्णु कार्की, सुभाष भण्डारीले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रदेश दुईबाट संजय कुमार यादव (सिराहा) निर्वाचित भएका छन् । उनले १ सय २० ल्याए । प्रदेश नम्बर दुईबाट, खगेन्द्र कर्ण, प्रवेश कुमार चौधरी, राम प्रगास यादव, संजय कुमार यादव (धनुषा), ले पनि उम्मेदारी दिएका थिए ।
प्रदेश नम्बर तीनबाट रामप्रसाद अधिकारी निर्वाचित भए । उनले २ सय ४८ मत ल्याए । प्रदेश नम्बर तीनबाट भरत खड्का, रविसुदन थापा, लोकबाहादुर कार्की, विनय राम भट्ट, विष्णु पौडेल –दारी), श्रीधर घिमिरेले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रदेश नम्बर चारबाट डिल्लीराम सुवेदी निर्वाचित भए । प्रदेश नम्बर चारबाट चन्द्रा अधिकारी, पवन नेपाल मित्र भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सुवास कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रदेश नम्बर पाँचबाट श्रीप्रकास राना निर्वाचित भए । उनले १ सय १२ मत ल्याए । प्रदेश पाँचबाट अजय रावल, एकराज खड्का, धर्मराज खनाल, पूर्ण केसी, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, मुक्तिराज पौडेल, सुमन खड्का र हरिषचन्द्र भण्डारीले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रदेश नम्बर ६ बाट खड्कबहादुर डाँगी निर्वाचित भए । उनले ८५ मत ल्याए । प्रदेश ६ बाट कृष्ण प्रसाद जैसी, केशरबहादुर शाही र राजीव कुमार केसीले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेश नम्वर सातबाट पुष्पकुमार शाही निर्वाचित भए । उनले १ सय ५१ मत ल्याए । सो प्रदेशबाट इश्वर मल्ल, सरोज न्यौपाने, सोपानसिंह बोहराले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
त्यसैगरी छात्रातर्फ उपाध्यक्षमा उर्मिला थपलिया निर्वाचित भइन् । उनले १७ सय २० मत ल्याइन् । थपलियासँगै सो पदमा कृष्णकुमारी बस्नेतको पनि उम्मेदवारी परेको थियो । बस्नेतले १४ सय ११ मत ल्याइन् । मधेसीतर्फ उपाध्यक्षमा पवन यादव निर्वाचित भए । उनले १५ सय ७५ मत ल्याए । उनीसँगै प्रभुनाथ राउत र अविद अरसदले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
आदिवासी–जनजातितर्फ नविन राई निर्वाचित भए । उनले १३ सय ४५ मत ल्याए । उनीसँगै अमृतकुमार श्रेष्ठ, खड्कबहादुर सुब्बा, टेकेन्द्र काम्वाङ, पूर्णकुमार तुम्बापो, प्रेमबहादुर छन्त्याल, रीसा श्रेष्ठले, रेनुका काउछाले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
महामन्त्रीको दुई पदका लागि पाँच जनाले उम्मेदावरी दिएका थिए । त्यस पदमा कुन्दनराज काफ्ले र सरोज थापा निर्वाचित भए । काफ्ले १७९४ र थापाले १२ सय ९० मत ल्याए । दिपक भट्टराईले १२ सय ८६, शंकर पौडेलले २ सय ७८ र हिमालदत्त श्रेष्ठले १२ सय ६५ मत ल्याए ।
कोषाध्यक्षमा शिव रिमाल निर्वाचित भए । उनले १२ सय ८७ मत ल्याए । कोषध्यक्षमा अन्जता अर्याल, उमेश भट्टराई, केदार खनाल, टीका श्रेष्ठ र निमा गिरीले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । अर्यालले ४ सय २, भट्टराईले १ सय ९, खनालले १ सय ४६ श्रेष्ठले २ सय १८ र गिरीले ९ सय ३४ मत ल्याए ।
सहमहामन्त्रीमा प्रदेश नम्बर एकबाट कृष्ण कार्की निर्वाचित भए । उनले १ सय २२ मत ल्याए । उनीसँगै प्रदेश नम्बर एकबाट सात जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेश नम्बर दुईबाट राजेकुमार रौनियार निर्वाचित भए । उनले १ सय ६ मत ल्याए । उनीसँगै तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेश नम्बर तीनबाट माधवप्रसाद ढकाल निर्वाचित भए । उनले १ सय ८ मत ल्याए । उनीसँगै सात जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेश नम्बर ४ बाट हरिहर शर्मा निर्वाचित भए । उनले १ सय ७१ मत ल्याए । उनीसँगै तीन जनाले प्रदेश नम्बर चारबाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रदेश नम्बर पाँचबाट प्रकाश घिमिरे निर्वाचित भए । उनले १ सय १८ मत ल्याए । प्रदेश नम्बर पाँचबाट नौ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेश नम्बर पाँचबाट ईश्वरबहादुर विष्ट निर्वाचित भए । उनले १ सय २१ मत ल्याए । प्रदेश छ बाट विष्टसँगै तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेश नम्बर चारबाट अच्युतराज कलौनी निर्वाचित भए । उनले १ सय ३९ मत ल्याए । उनीसँगै चार जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
छात्रातर्फ साधाना घिमिरे निर्वाचित भइन् । उनले १२ सय ४५ मत ल्याइन् । सो पदमा पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । मधेसीतर्फ परमेश्वर शाह निर्विरोध भए । आदिवासी–जनजातितर्फ दिपेन राई निर्वाचित भए । उनले ११ सय ७० मत ल्याए । सो पदमा उनीसँगै पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । दलिततर्फ ललिता सुनार निर्वाचित भइन् । उनले १६ सय ११ मत ल्याइन ।
सो पदमा उनीसँगै तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । पिछडिएको क्षेत्रबाट अम्बिका चलाउने निर्वाचित भएकी छिन् । उनले ६९ मत ल्याएकी छिन् । उनीँगै सो पदका लागि पाँच जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । उपत्यका अञ्चलबाट प्रेमराजा जोसी निर्वाचित भएका छन् । उनले ८६ मत ल्याए । उनीसँगै उपध्यकाबाट उनीसँगै १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका ६ जनाले शून्य मत ल्याएका छन् । शून्य मत ल्याउनेमा दुर्गाप्रसाद जोसी, खेमराज उपे्रती, तारप्रसाद बञ्जाडे, भुपेन्द्र गिरी, विवेक गौतम, खिमानन्द भट्ट छन् । दश भन्दा कम मत ल्याउनेको संख्या थुप्रै छ ।
वाग्मती, १५ साउन । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको कारागारका ३५५ कैदीलाई कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको
काठमाडौँ, १५ साउन । जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी
काठमाडौँ, १५ साउन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोली खटाउन निर्देशन
विपद्मा मानवीय सेवा पुर्याउने परोपकारी सस्था आफैँ विपद्मा
काठमाडौँ, १५ साउन । मानवीय सेवामा अहोरात्र तल्लीन हुनुपर्ने परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी यतिखेर